Ciqaabta ka jirto xabsiyada sirta ah ee al-Shabaab
Waxaa Dhawaan faahfaahin laga helay xabsiyo qarsoon oo kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab ay ku leedahay deegaannada ay ka arrimiso. Nin la yiraahdo Farxaan Maxamuud oo ka tirsanaa ururka al-Shabaab ayaa soo bannaanka keenay ciqaabta daran iyo jirdilka ka jiraan xabsiyadaas.
Farxaan wuxuu sheegay in dhiig-cabtada al-Shabaab ay leeyihiin ayna maamuulaan xabsiyo kala nooc ah oo dadka siyaabo kala duwan loogu ciqaabo, waxaana xabsiyadan la aasaay sanadkii 2008, waxaana ku dhintay dad badan oo xabsiyadaasi lagu ciqaabay.
Xabsiyada al-Shabaab waxaa maamushaa koox sirdoon ah, waxaana dadka lagu ciqaabay ka mida ajaaniib al-Shabaab ka mid noqotay, waxaana ururka dhexdiisa ka jiraa is-basaasid iyo in xubnaha ay iyaga dhexdooda is jaajuusaan. Sidoo kale, Zubeyr al-Muhaajir oo ah nin hadda ka hor isu soo dhiibay dowladda Soomaaliyeed kana soo goostay al-Shabaab ayaa sheegay in jirdil iyo tacdiib badan ay ka jiraan xabsiyada qarsoon ee al-Shabaab.
Zubeyr wuxuu sheegay in xubnaha al-Shabaab ay filimaad ka duubaan dadka iyagoo la ciqaabayo taaso caddeyneyso araxan-darrada ururka dilaaga ah. Zubeyr oo isaga laftiisa tacdiibtaas loo geystay ayaa sheegay in dad badan ciqqaabta loo geystay darteed ay isaga qirtaan dambiyo aysan galin oo dabeetana lagu xukumay dil.
Inta badan dadka al-Shabaab keenaan fagaarayaasha oo ay toogtaan waa dad dambiyada la dul-saaray, la ciqaabay si ay u qirtaan dambiyadaas markaas ka dibna qiil looga dhigo in iyaga laftooda ay qirtaan dambiyadaas.
Shacab wadaan abaabul dagaal oo ka dhan ah al-Shabaab
Dad shacab ah ayaa abaabul ka dhan ah al-Shabaab ka wadaan deegaanno ka mid ah gobalka Galgaduud kaddib markii shacab halkaasi lagu xiray. Ku dhawaad 20 qof oo ay isugu jiraan dhallinyaro, dumar iyo odayaal ayaa al-Shabaab ugu xiran dhul howd ah oo u dhow deegaanka Qayid ee gobalka Galgaduud.
Al-Shabaab dadka ay xiratay ayaa ah xoola-dhaqato ka biyo diideen inay xoolahooda bixiyaan kaddib markii xubno ka tirsan al-Shabaab ay isu dayeen inay ka faro maroojistaan xoolahooda. Dhammaan dadka al-Shabaab ay ku xireen deegaanka Qayid iyo deegaannada u dhow waa dad reer guuraa ah oo masaakiin ah oo wax galabsan.
Dadka wadaan abaabulka ka dhan ah al-Shabaab ayaa sheegeen in aysan u dulqaadan karin dhaqammada al-Shabaab ee ku aaddan dhibaateynta shacabka.
Xarigga dadweynaha aan wax galabsan waxay sababtay in shacab badan ay ka barakacaan tuuloyinka u dhow deegaannada ay al-Shabaab dadka ku xirxirtay.
Dadweynaha deegaanka ee wadaan abaabulka ka dhanka ah al-Shabaab waxay wacad ku mareen inay dagaal culkus ku qaadi doonaan ururka dilaaga ah ee al-Shabaab.
Waxaa waayahaan dambe aad u bateen dagaallada ay dadka shacabka ah ku qaadaan ururka xagjirka ah ee al-Shabaab iyadoo dagaalladaas lagu laayay horjoogayaal iyo xubno ka tirsan al-Shabaab.
Waxaa dalka ka jiraan ururro iskooda isu abaabulay si ay dagaal ula galaan ururka al Shabaab. Kooxahaas waxaa ugu caaansan kooxda Macawiisley taasoo sanadkii 2014-kii laga aasaasay magaalada Aadan Yabaal ee gobalka Shabeellada Dhexe.
Jab weyn oo soo gaaray al-Shabaab toddobaadkii la soo dhaafay
Ciidamo ka tirsan kuwa Kumandoska Soomaaliya ee DANAB ayaa howlgal qorsheysan oo ka dhan ahaa ururka Illaah ka furtay ee al-Shabaab waxaa ay ka fuliyeen degaanno ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose.
Howlgalka oo ay fuliyeen Ciidamada Guutada 16aad ururka 5aad ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa ka dhacay degaannada Katiin, Bernasey, Warabole, Cusbo iyo Xawaljiri waxaana saraakiisha hoggaamineysay ay sheegeen inay uga jawaabayeen cabasho uga timid shacabka degaannadaas.
Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaannada ay weli ka arrimiso al-Shabaab waxaa soo wajahaan xaalado aad u adag oo kala duwan, waxaana muuqata in dhawaan dhibaatooyinkaas ay dhammaan doonaan maaddaama ururka dilaaga ah lagu wado in
Saraakiil ka tirsan Guutada 16aad ee Ciidanka DANAB ayaa waxaa ay sheegeen in al-Shabaab ay lacago ka qaadayeen dadka shacabka ah taas oo ay ugu magac dareen zakawaad, isla markaana dadka si awood ah looga qaadaya qofkii ka biyo diidana waxaa la dul saaraa dambiyo.
Saraakiisha Ciidanka DANAB waxay sheegeen inay xaqiijiyeen amniga degaannada ay howlgalka ka fuliyeen. Sidoo kale, Ciidamada Danab ayaa sheegay in howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka Sh/hoose ay u dileen saraakiil ka tirsanayd ururka al-Shabaab.
Sida laga soo xigtey saraakiil ka tirsan Danab hawlgalkaan ayaa laga fuliyey duleedka degaanka Leego, gaar ahaan tuulada Sahan-yareey oo ka tirsan degmadda Walan-weyn, waxaana lagu diley horjoogeyaal ay kamid yihiin Cabdicasiis Awoowe u qaabilsanaa Sirdoonka gobolka Shabeelada hoose, horjoogihii qaraxyada Gobolka Sh. hoose (Abuu-qadaab) iyo lix maleeshiyaad ah oo la socday sida ay Warbaahinta codka ciidamadda qalabka sida u xaqiijiyeen Saraakiisha Ciidanka Danab ee hawlgalkaasi fulinayey. Ciidanka DANAB ayaa mar walba waxay howlgallo qorsheysan ka fuliyaan degaanno ka tirsan Shabeellooyinka iyo Gobolka Jubbada Hoose.
Al-Shabaab oo carruurta ay u diraan ismiidaaminta siiyaan mukhaadaraad
Ciidammada Dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaandooska ee loo yaqaanno Danab ayaa howl-gal ka sammeeyeen degmada Kuuntuwaarey ee gobalka Shabeellada Hoose oo dhawaan laga saaray kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab.
Inta ay ciidammadu ku guda jireen howl-galkaas ayaa waxay gacanta ku dhigeen beer weyn oo kooxda al-Shabaab ku beeri jireen maandooriyaha loo yaqaanno xashiishka.
Sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay dowladda Soomaaliya, kooxda al-Shabaab waxay xashiishkaas u dhoofin jirtay magaalada Muqdisho.
Degmada Kuuntuwaarey ayaa dhawaan waxaa la wareegay dowladda Soomaaliyeed waxaana halkaa lagu dilay saraakiil iyo horjoogayaal sare oo ka tirsanaa al-Shabaab. Degmadaas waxay ka mid aheyd meelaha ay ugu xoogga badneyd ee gobalkaas ee ay ka arriminayeen ururkaas dilaaga ah.
Kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab waxaa laga saaray goobo badan oo ay hadda ka hor ka arriminayeen oo ka tirsan gobalka Shabeelada Hoose, waana guul u soo hoyday ummadda Soomaaliyeed.
Beerta xashiishka ee kooxda al-Shabaab, oo aaminsan inay kaligood muslimiin yihiin, dadka kale dhammaantoodna yihiin murtaddiin, ay beeraneysay waxay caddeyneysaa in ay tahay koox maafiyo ah oo diinta islaameed ee suuban iska sheegatay.
Waxaa la ogaaday in maandooriyaha ay kooxda Shabaab beerato, ay siiyaan carruurta da’ yarta ee ay u adegsadaan qaraxyada ismiidaaminta maaddaama madkaxdooda aysan xamili karin.
Sidoo kale, maandooriyaha xashiishka ee kooxdu beerato waxay ka heshaa dhaqaale badan iyagoo toos uga iibiyaan dadka isticmaalaan maandooriyeyaasha.
Dadka deegaanka waxay sidoo kale sheegeen in madaxda al-Shabaab ee ku sugneyd Kuuntuwaarey ay iyagu laftood isticmaalayeen maandooriyaha xashiishka.
Kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab waxaa laga saaray goobo badna oo dalkeenna ka tirsan ooh adda ka hor ay dadweynaha Soomaaliyeed ku dhibaateyn jireen.
Khaladka al-Shabaab oo shacabku fahmeen
Al-Shabaab oo addoonsadaan dumarka si ay ugu galmoodaan
Howl-gallo xoog leh oo ka dhan ah Shabaab oo lagu dhawaaqay
Dagaallada Macawiisley ku qaaddo Shabaab oo bateen
Al-Shabaab oo si naxariis darro ah u dilay nin curyaan ahaa